आज देशमा बृहत शान्ति सम्झौता भएको चौध वर्ष पुरा भएको छ । तरपनि द्वन्दकालिन विराषत अथवा शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक रुपमा द्वन्दकाल सकिएतापनि, संविधान बनेतापनि विगतका द्वन्दकालिन सामाजिक, आर्थिक, सांकृतिक सम्वन्धहका असरहरु बाँकि नै हुन्छन् र छन् पनि । द्वन्दकालमा बिग्रिएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्वन्धहरु नसुघ्रे सम्म सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण भएको अनु...
मोबाइल बन्द गरेर बाथरुम गएँ । आज मनमा किन त्यति थोरै कुराकानी र केही तस्बिरहरुले मनमा तरंग ल्याईरहेछ । आफ्नो मनले आफैंलाई प्रश्न गर्यो ! पूर्णरुपमा स्वस्थ नभईसकेका कारण कतै जाने योजना थिएन । जाउलो बनाएर खाएँ । मेडिकलबाट ल्याएको औषधी दुईटा ट्याब्लेट बाँकी थियो एउटा खाएँ । अस्ति पढ्दापढ्दै नसकेर छोडेको पुस्तक “गुलावी उमेर“ पढेँ । आनन्द महसुस भयो फेरि सुतेँ । उठ्दा अपरान्हको चार बज्नै लागेको रहेछ ...
विश्वभरमा नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल र चुनौती पुर्ण बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा ४५ करोड मानिस यस समस्याबाट प्रभावित छन् । नेपालमा पनि ६० लाख भन्दाबढी नेपालीहरु कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या एवं मानसिक रोगबाट प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ४.३ प्रतिशत वयस्कहरुमा मानसिक...
ओझेलमा परेको राप्रपाको जन्मसिद्ध पहिचान हलो पुनः स्थापित भएको छ । केहीलाई अर्कै भैदिएको हुने भन्ने लागेको थियो होला, कसैकसैले हिजो राप्रपाले हलो लिएकोले घाम नलागेको र पानी परेको हास्यास्पद तर्क पनि गरे । हलो लिनु र घाम नलाग्नु एउटा प्राकृतिक संयोग मात्रै थियो । नेपाली जनता विभिन्न आस्था र विचारमा विभाजित छन् । जुनसुकै आस्था र विचार भए पनि गएको दशक नेपाली राजनीतिक इतिहास कालमै राजनीतिक दलहरु सबैभ...
उ भद्र छे, शालिन छे। कम बोल्छे, कम रिसाउँछे , नरम बोल्छे। रुपमा पनि रुप, उतिकै व्यवहारिक पनि छे रुक्मिणी । उसलाई आफ्नो जिन्दगिमा ल्याउन को मरिहत्ते गर्दैन्थ्यो। कृष्ण उसको यहि शालिनता प्रती मरिमेट्थ्यो। कुनै न कुनै बहानाले नजिक हुन खोज्थ्यो। उ पनि व्यवहारिक थियो। संगैका दौँतरी भन्दा अलग, उमेरले घुमफिर, मोजमस्तिमा रमाउने बेला भए पनि उ आफैमा आत्मनिर्भर पनि थियो। रुक्मिणिको मन उसको त्यही व्यवहारिक पन...
अहंकारवाद लाई कुनै बेला समयले सोध्यो – सत्ताभोग खोज्ने कि मुद्धा र एजेन्डाका लागि भरोसामा अड्ने ? महाभारत युद्ध पूर्व सहयोगका लागि द्वारिका पुगेका अर्जुन र दुर्योधन लाई भगवान श्रीकृष्णले पनि यस्तै प्रश्न सोध्नु भएको थियो । श्रीकृष्णले सोध्नु भयो ।।। तपाई हरू दुइले युद्धका लागि कसलाई रोज्नु हुन्छ रु सशस्त्र यादव सेना रोज्ने कि निस्शस्त्र मलाई रोज्ने ? एक चिज रोज्न सक्नु हुन्छ । त्यो सुन्नासाथ अहं...
गणेश प्रसाद दुलाल / मुलुकको राजनीतिमा आफ्नै मौलिक अस्तित्व र पहिचान बोक्न सफल भैरहेको राप्रपा संयुक्त कमल थापाको राप्रपा संग मिल्ने क्रममा आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्दै छ । आखिर कुन शक्ति को दबाब ले राप्रपा संयुक्त का अध्यक्ष हरु पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी लाई कमल थापा जस्तो पात्र र प्रवृत्ति संग मिल्न बाध्य पार्‍यो ? कार्यकर्ता हरुको प्रश्न छ । गएको एकता महाधिवेशनमा कमल थापा ला...
डा. बिपेश आचार्य निर्देशक पुर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालय,शिक्षण अस्पताल गोठगाउँ ,,सुन्दरहरैंचा कोरोनाको कहरले विश्व भरीनै तहल्का मच्चिएको यो समय मानव जातिले कहिल्यै पनि बिर्सदैन होला । हरेक सय वर्षमा देखिदै आएका यस्ता माहामारीले अहिले टोल, समाजमा चर्चा बटुलिरहेको छ । अहिले सम्म सुनिएको हरेक सय वर्षमा पुष्टी भएको यस्ता विश्व महामारी सायद अबको केहि वर्ष हरेक टोल, समाज,देशमा चर्चाको विषय बनेको छ । हल...
कोरोना भाइरस ( कोविड १९ ) को महामारीले बिश्व अक्रान्त छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । अझ प्रदेश एकमा भाइरसबाटै संक्रमित हुनेहरूको संख्या दैनिक बढन थालेको छ । समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलन थालेपछि प्रदेश सरकार र मातहतका स्थानीय निकायहरूले आ आफ्नो शहरलाइ लक डाउन घोषणा गरेका छन भने केहि जिल्लाहरूमा प्रसाशनले निषेधज्ञा जारी गरेको अवस्था छ । हुन त लक डाउन र निषेधज्ञा नै कोरोनाको औषधी भने हइन । सा...
कोरोना भाइरस, (कोभिड —१९) संग यतिवेला तपाईं–हामी मात्र होइन, सिंगो विश्व जुधिरहेको छ । दिनहुँ बढिरहेको मृत्युको संख्याले मानब जगत त्रसित छ  । दिन दिनै यसले मानव गतमा मानसिक तनाव पनि बढाई रहेको छ । कोरोना भाइरस बाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन २०१५ ले वर्ष १६ देखि ४० वर्ष उमेरको समुहलाई युवा भनि परिभाषित गरेको छ र नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत जनसंख्...